गठबन्धन बनेपछि कांग्रेससँग पनि प्रतिस्पर्धा छैन – Rajdhani Daily
चुनावी अभियानलाई कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ ?
हामीले जनतालाई आह्वान गरेर सर्मथकसहित थोरै–थोरै अन्य पार्टीका व्यक्ति पनि चुनावी अभियानमा सामेल गराएर चुनावी अभियानलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेका छौं । चुनावी अभियानका क्रममा हामीले जनताले उठाएका कतिपय सवालको पनि जवाफ दिँदै अघि बढेका छौं । हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने हामीले केके काम गर्छौं भन्ने कुरा जनतालाई स्पष्ट रूपमा भनेका छौं । यसरी गाउँगाउँमा सानासाना भेला गरेर चुनावी अभियानलाई अघि बढाइरहेका छौं । साथै मतदान कसरी गर्ने भन्नेबोर पनि सिकाउँदै हिँडेका छौं । हाम्रो अभियानले जनतामा उत्साह जगाएको छ ।
तपाईका चुनावी एजेन्डा केके छन् ?
हाम्रा चुनावी एजेन्डा तीन तहका छन् । त्यो भनेको तत्कालिक, मध्यकालिक र दीर्घकालीन हुन् । तत्कालका लागि जनताको गाँस, बाँस, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र मनोरञ्जनका विषय उठाएका छौं । त्यसपछि सिँगो समाजको परिवर्तन हो । हाम्रो संविधानले अबको सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरण समाजवाद उन्मुख हुनु पर्छ भनेका छौं । यसै बमोजिम यी विषय हाम्रा साझा घोषणाअनुसार अघि सारेका छौं । नेपाली समाजमा अहिले पनि घरबारविहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन, मुक्तकमैया कमलहरी, गरिब र उत्पीडित पहिचान गरी हाम्रो सरकार बनेपछि पाँच वर्षभित्रमा सुविधा सम्पन्न आवास, एक परिवारमा एक महिला र एक पुरुषलाई रोजगारीसँगै माध्यामिक तहसम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा पास गरेको ६ महिनाभित्रै तालिम दिई रोजागारी दिएर शैक्षिक बेरोजगारी हटाउने, स्वास्थ्य बिमा लागू गर्ने, उपचारका लागि गरिबीको रेखामुनि रहेकालाई सरकारले आधा पैसा मिनाहा गर्ने मध्यकालीन एजेन्डा छन् । यसैगरी ६ वर्षभित्रमा नेपाली जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने लक्ष्य लिएका छौ । सम्पूर्ण कृषि भूमिमा सिँचाइ, नेपालका प्रमुख नदीहरूबाट बीस हजार मेघावाट भन्दा बढी जल विद्युत् आयोजना सुरु गरी विद्युत् उत्पादनले नेपाललाई समृद्ध बनाउँछौं ।
तपाईका यीमध्ये केही एजेन्डा पुरानै हुन् । चुनाब जितेर गएपछि सबै कुरा बिर्सेको मतदाताको आरोप छ त ?
बिर्सेको होइन । हामी सरकारमा बस्दा लागू गर्ने प्रयास गर्छौं । सरकारबाट बाहिरिएपछि अरूले आफ्नो अनुकूलले मात्र काम गर्ने परिपाटीले गर्दा हामीले सुरुवात गरेका कामहरू ओझेलमा पर्छन् । हामी प्रतिपक्षमा हुँदा सरकार चलाउनेलाई घचघच्याउने हो । सरकारमा नहुँदा काम पूरा गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ ।
कांग्रेसका प्रभावशाली नेता सञ्जय गौतम तपाईसँग चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ । तपाईले नै चुनाव जित्नुहुन्छ भन्ने आधार के छ ?
कांग्रेससँग प्रतिस्पर्धाको कुरै छैन । २०४८ सालदेखि भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामले पनि कांग्रेस भन्दा वामपन्थीको जनाधार निकै बढिरहेको देखाइसकेको छ । यहाँ हाम्रो पक्षमा देखिएको जनमत नै मैले जित्ने आधार हो । वामपन्थीको जनाधारलाई कसैले फकाएर प्रलोभनमा परेर कुण्ठित गर्न सक्दैन । बर्दियामात्र होइन नेपालभर हामीले गरेको चुनावी तालमेलअनुसार कम्युनिस्ट पार्टीको पक्षमा दुई तिहाइ जनमत छ । त्यो जनमत नै वाम गठबन्धनले जित्ने मुख्य आधार हो ।
अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचन जितेपछि तपाई बर्दिया छाडेर प्युठान जानुभयो । यस पटक फेरि फर्कनु भएको छ । बर्दिया छाडेपछि कार्यकर्तामा असन्तुष्टि बढेको भनिन्छ नि ?
म बर्दियामा फर्केर आउँदा कार्यकर्ता मतदाता असन्तुष्टि छन् भन्नै मिल्दैन । यस अघि पनि चुनाव जितेर छोडेर किन जानु भयो भन्नेमा असन्तुष्टि हो । अहिले फर्केर आउँदा कार्यकर्तामा उत्साह जागेको छ । मेरो आवश्यकता फेरि महसुस भयो । विपक्षीसँग खरो उत्रनका लागि कार्यकर्ताले मेरो उपस्थिति अनिवार्य ठाने । मैले पनि त्यही महसुस गरे । त्यो बेला मेरो व्यक्तिगत निर्णयले बर्दिया छाडेको होइन । पार्टीको निर्णयअनुसार प्युठान गएको हो । यहाँ त पार्टी बलिायो थियो नै । प्युठानमा पार्टीलाई बलियो बनाउनु थियो । त्यसैले पार्टीको निर्देशन बमोजिम त्यहाँ गए । आखिर पार्टीलाई फाइदा नै भयो । म यहाँ फर्कंदा कोही आतंकित भएका छन् भने त्यो भनेको कांग्रेस नै हो । वाम गठबन्धन भएपछि कुनै पनि ठाउँमा कांग्रेससँग प्रतिस्पर्धा नै छैन ।
चुनाव जितेपछि तपाईंको पहिलो प्राथमिकता के हुन्छ ?
मेरो पहिलो प्राथमिकता भनेको सुकुम्बासी, घरवारविहीन, मुक्तकमैया, कमलहरी र पिछडिएका जातजातिलाई सुविधा सम्पन्न आवास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य मनोरञ्जन प्रदान कामबाट सुरु हुन्छ । यसैगरी कृषिको व्यवसायीकरण, ऊर्जाको विकास, पर्यटनको विकास र औद्योगिक क्षेत्रको विकास प्राथमिकतामा हुनेछ । यी सबै कामहरू ५ वर्षमा हामी पूरा गर्नेछौं । र हामीले ३ तहमा रेल चलाउनेछौं । एउटा पूर्वपश्चिम राजमार्गको समानान्तर, औद्योगिक करिडोरको समानान्तर, मध्यपहाडी राजमार्ग समानान्तर र काठमाडौंमा विद्युतीय मेट्रो रेल सञ्चालन गर्छौं । यसैगरी ४ लेनको हुलाकी सडक, उत्तरदक्षिण २ हजार किलोमिटर सडक निर्माण र ८१ हजार किलोमिटर आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं अन्तर्गतका बाटाहरू पिच गरी कृषि सडकका रूपमा स्थापित गर्नेछौं ।
तपाईं वाम गठबन्धनको सूत्रधार मानिनु हुन्छ । यो वाम गठबन्धन चुनावसम्मको मात्र हो कि पार्टी एकतासम्म पुग्छ ?
यो चुनावसम्मका लागि मात्रै गठबन्धन हुँदै होइन । हाम्रो पार्टी एकताको कुरा हो । चुनावी गठबन्धन हाम्रो पार्टी एकताको पहिलो चरण हो । पार्टी एकता समन्वय समिति केन्द्रमा, त्यसपछि प्रदेशमा, जिल्लामा र स्थानीय तहदेखि वडासम्म बनिसकेको छ । त्यसकारण पार्टी एकता प्रमुख हो । पार्टी एकता गर्न समय लाग्ने भएकाले हतारमा चुनावी तालमेल मात्र ग¥यौं । निर्वाचन आयोगले दिएको समयतालिका अनुसार समयमै पार्टी एकता गर्न सकेनौं । त्यसैले तालमेल मात्र ग¥यौं । पार्टी एकता हुने कुरा निश्चित छ । अब कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत हुन्छ । र यो एकतापछि सबैभन्दा ठूलो चोट परेको छ भने त्यो चोट कहिल्यै नमेटिने गरि नेपाली कांग्रेसलाई परेको छ । अहिलेको तालमेलबाट बन्ने सरकार ५–१० वर्षका लागि मात्र होइन । आगामी ३० वर्षसम्म हाम्रै नेतृत्व हुन्छ ।
प्रस्तुति : सुदीप अधिकारी